प्रेममा ‘यौन’ अपरिहार्य छैनः नवअभिनेत्री रुविना – Saurahaonline.com
प्रेममा ‘यौन’ अपरिहार्य छैनः नवअभिनेत्री रुविना
मनोज न्यौपाने, काठमाडौं : फिल्म ‘लभ डायरीज’ आजदेखि प्रदर्शनमा छ। फिल्ममार्फत् नव-नायिकाको रूपमा रुविना थापा रजतपटमा पाइला राख्दै छिन्।
‘प्रेमिल’हरूका लागि फिल्म भनिएको ‘लभ डायरीज’बाट आफ्नो अभिनय यात्रा स्थापित हुनेमा आशावादी छिन् रुविना।
कन्सलटेन्सीमा काम गरिरहेकी उनी अबको यात्रा अभिनय र कला क्षेत्रमा खर्चने ध्याउन्नमा छिन्। यद्यपि, अबको यात्राको मागदर्शक भने ‘लभ डायरीज’ नै भएको उनको भनाइ छ।
फिल्ममा रुविनको स्क्रिन पार्टनरमा छन् सुशील श्रेष्ठ। फिल्म ‘होस्टेल रिट्रन्स’बाट चर्चामा आएका सुशीलसँगको ‘लभ क्यामेस्ट्री’को आधारले रुविनाको भविष्य तय गर्ने देखिन्छ। उनै नव-नायका रुविनासँग गरिएको ‘प्रेम दिवस’ अर्थात् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ विशेष कुराकानीः
माया/प्रेमप्रति तपाईंको बुझाइ के हो?
यो आफैंमा सुन्दर कुरा हो। र, माया/प्रेम केहीसँग मात्र होस्। त्यो प्रेमले एकअर्काभित्रका राम्रा पक्षलाई सहजै बुझ्न सकियोस्।
अनि, ‘भ्यालेन्टाइन डे’ भनेको चाहिँ?
हुन त माया गर्नेहरूका लागि कुनै विशेष दिनको जरुरत छैन। तर, यिनै मायालु जोडीहरूको उत्सवको दिन चाहिँ ‘भ्यालेन्टाइन डे’ हो।
यो उत्सवलाई कसरी मनाउँदै आउनुभएको छ?
वास्तवमै यो दिनलाई मैले खुलेर मनाएको छैन। र, यदि कोहीसँग घुम्नु छ, माया/प्रेममा रमाउनु छ भने यो दिन नै कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। माया अनि प्रेमसम्बन्धमा मेरा लागि हरेक दिन ‘भ्यालेन्टाइन डे’ हुन्।
‘प्रेम दिवस’ सप्ताहकै रूपमा ‘सेलिब्रेट’ गर्ने चलन छ नि?
हाम्रो समाजमा विशेषतः विवाहित जोडीले मात्र खुलेर यो दिन ‘सेलिब्रेट’ गरिरहेका हुन्छन्। प्रेम जोडीहरू भने गोप्य रूपमा वा लुकेरै रमाइरहेका हुन्छन्।
हाम्रो समाज त्यति धेरै खुला पनि भएको छैन, जसले प्रेमि-प्रेमिकालाई खुलेरै भ्यालेन्टाइन डे मनाउन देओस्। धेरैले यो दिनलाई सुन्दर दिनका रूपमा मनाउलान्। तर, खुलमखुला मनाउन पाउने गरी समाज तयार भएजस्तो लाग्दैन।
यो दिन हाम्रो समाजका लागि आवश्यक छ कि छैन?
किन नहुनु? माया प्रेमका विषयमा एकआपसमा खुसी हुन पाउनु, ‘सेलिब्रेट’ गर्न पाउनु आफैंमा सुन्दर पक्ष हो नि!
आफ्ना कुरा भन्नुस् न, तपाईं मायामा हुनुहुन्छ कि नाइँ?
(प्रतिप्रश्न गर्दै) म मायामा छैन जस्तो लाग्छ र?
पक्कै पनि छु। तर, यहीसँग छु, मेरो ‘ब्यायफ्रेन्ड’ छ वा यो/त्यो मात्र होइन। सबैसँग, सबै कुरामा मायामा छु।
‘भ्यालेन्टाइन डे’ अघिको सप्ताहबारे तपाईंका केही अनुभव छन्?
‘रोज डे’, ‘प्रपोज डे’, ‘चक्लेट डे’लगायत के-के जाती केही पनि ‘सेलिब्रेट’ गरेकी छैन। सानो छँदा वा विद्यालय उमेरमा यसको माहोल त्यति थियो जस्तो लाग्दैन। यो सप्ताहको कुरा अलि पछि देखि बढे जस्तो लाग्छ। र, यो सप्ताहलाई मान्दा पनि मान्दिनँ।
तपाईंलाई अहिलेसम्म कसैले ‘रोज’ अर्थात् ‘गुलाबको फूल’ दिएको छ कि छैन?
कुनै केटाहरूले विशेष गरी ‘रोज डे’ कै दिन चाहिँ दिएका छैनन्। मैले ‘रोज’ पाएकै छैन।
पाइनँ भनेर गुनासो छ?
दिनुपर्ने हो किन दिएनन् भनेर गुनासो त छ नि! माया गर्ने मान्छे त छन् जस्तो लाग्छ तर, खै किन दिएनन् होला।
विद्यालयदेखि नायिका हुन्जेलसम्ममा ‘भ्यालेन्टाइन डे’का केही स्मरण त पक्कै छन् होला?
छन् नि, विद्यालय पढ्ने बेलामा ‘लभ लेटर’ लिएँ। एउटा रमाइलो किस्सा छ। एलए (लिटिल एन्जल्स स्कुल) मा कक्षा ९ मा हुँदाको कुरा हो, ‘क्लास’मा पढिरेकी थिएँ। कसैले झ्याल बाहिरबाट केही चीज पठायो।
मैले थाहा पाएँ-एक प्याकेट चकलेट र ‘प्रपोज लेटर’ झ्यालबाट भित्र पठाएको रहेछ। म पहिलो बेन्चमा बस्थेँ। पछाडिबाट चकलेट र लेटर आउँदा-आँउदै मेरो हातमा ‘लेटर’मा मात्र आइपुग्यो। चकलेट साथीहरूले पहिले नै झिकिसकेका रहेछन्।
यस्तो बाध्यता आइपर्‍यो कि चकलेटसकियो, प्रेमपत्र त लिनैपर्‍यो। चकलेट अघि नै बिक्री भएपछि प्रेम-पत्र स्वीकार गर्नुपरेको कुरा अझै पनि यादगार छ।
प्रेम-पत्रमा के लेखिएको थियो?
यस्तै लेखेको थियो भन्ने कुरा त याद छैन। त्यही हो मायाका कुराहरू- ‘आइ लभ यु, आइ लाइक यु’, मलाई तिम्रो यो कुराहरू मनपर्छ यस्तै यस्तै…। त्यसपछाडि चाहिँ यसरी ‘प्रपोज’ अनि चिठी आउने चाहिँ भाएको छैन।
त्यो साँच्चै मायाका लागि थियो कि आकर्षण?
लाग्छ त्यो बाल प्रेम थियो। निस्वार्थ प्रेम थियो जस्तो लाग्छ। साँचो माया पनि भन्न मिल्दैन, आकर्षण पनि थिएन होला। उद्देश्यविहीन माया थियो त्यो।
त्यो उमेर प्रेमका कुराले त्यसै-त्यसै रोमाञ्चक हुने उमेर हुँदो रहेछ। त्यही नै हुन्थ्यो।
नयाँ पुस्ताले माया/प्रेमसँग ‘यौन’लाई अपरिहार्य मान्छन। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। अपरिहार्य भन्ने चाहिँ होइन। दुईजना माया गर्नेका बीचमा शारीरिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। यदि प्रेम गर्नेहरूका लागि प्रेम दर्शाउने तरीका ‘यौन’ हो भने ठिक छ। तर, ‘यौन’लाई मात्र सम्बन्धको आधार मान्न सकिन्नँ।
यदि प्रेमी जोडीमा अर्काबीचमा आदर-सम्मान अनि सकारात्मक बुझाइ छ भने त्यो उनीहरूबीचको कुरा हो। तर, कसैले पनि म यौनका लागि माया गर्छु भन्छ भने त्यो सरासर गलत हो।
मन मिलुन्जेल माया-प्रेम अनि यौन, पछि सम्बन्ध बिग्रिएर ‘ह्यासट्याक मि टु’ पनि भन्ने गरिन्छ नि?
यस सम्बन्धमा मैले त्यस्तो अनुभव गरेकी छैन। मेरो सर्तमा परेको कुरा पनि भएन। मलाई कुनै ‘आइडिया’ नै भएन।
‘भ्यालेन्टाइन डे’ विशेष केही सन्देश छ?
विशेष गरी माया गर्ने जोडीहरू हुनुहुन्छ भने मायाको शुभकामना! सम्बन्ध दीर्घकालीन रहोस्। मायामा हुनुहुन्न भने पनि पक्कै ‘प्रेमिल’ व्यक्ति भेट्नुहुन्छ होला।
अनि, हाम्रो फिल्म ‘लभ डायरीज’ भ्यालेन्टाइन डे’मै प्रदर्शनमा आँउदैछ, हलमा सँगै बसेर फिल्म हेरौंला।